आमा Archives - Page3of5- नारी खबर
ओ बा ! कति सालमा व्ये गर्‍या रे मलाई?
फाल्गुन २९, २०७३ - आइतवार | नारायण ढुंगाना
चितवन – पखेरामा बनेको सानो झुप्रोको माइती घर। अगेना छेउमा मैलो चोलो र फरियामा डङ्रङ्ग सुतेकी छिन् ताराकुमारी चेपाङ। झिङ्गा भन्किरहेको छ। झिङ्गा आउँछ भनेर हातले नाकमुखमा छोपेकी छिन्। दुई बच्चा अर्ध निद्रामा रहेकी उनको दुईतिर बसेर स्तन चुस्दैछन्। सानो बच्चालाई ताराकुमारीले हातमा च्यापेकी छिन् भने अर्को बच्चा त्यहीँ निदाएको छ। सरसफाइको अभावमा रहेको बच्चाको…
अकालमा ज्यान गुमाउँदै गर्भवती आमाहरू
फाल्गुन २१, २०७३ - शनिबार | - कृष्णप्रसाद गौतम
नेपालगन्ज – बाँकेमा चालू आवको ६ महिनामा १२ सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । साउनदेखि पुससम्म उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । गत आवमा २२ जनाले सुत्केरी अवस्थामै ज्यान गुमाएका थिए । कार्यालयका अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २० सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ । होलिया गाविसमा यो वर्ष दुई महिलाले…
यी कस्ती आमा, जसले जन्मने बितिक्कै बच्चालाई ब्लेडले घाँटीमा काटेर मारिन्
२२ पुस, ललितपुर – आफन्त र समाजले थाहा पाउने डरले चाँपागाउँ निवासी एक अविवाहित युवतीले जन्म हुनासाथ आफ्नै शिशुलाई शौचालयमा लगेर ब्लेटले घाँटी काटी हत्या गरेकी छिन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इर्खु गाविस घर भएकी करिव १८ वर्षकी अनिषा तामाङले समाजबाट लुकाउनका एक हप्ता अघि शिशुको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । केही समयसमयदेखि…
आफ्नै आमालाई रुवाए क्याम्पस पढाउने जितेश्वर सर
दुई तीनवटा विषयमा डिग्री गरेका जितेश्वर ठाकुर दोलखामा क्याम्पस पढाउँछन् । तर लेखपढ गर्न नजान्ने बृद्ध आमालाई बैंकबाट ऋण निकाल्नुपर्‍यो सही गरिदिनुस भन्दै झुक्याएर भएभरको जायजेथा, जग्गा, जमिन, आफ्नी आमाको नामबाट श्रीमतीकी आमाको नाममा पास गरिदिए ।
नेपालको पहिलो महिला कुलपतिको घाउ : ‘सपनामा छोरी आउँछे, रुन्छे, मलाई जानै मन छैन भन्छे’
उमेर पुगेकी आमा जाँदा रोइन् अवश्य तर छातीमा विस्मात बोकेर हिँडिनन् स्वीकारिन् प्रकृतिको नियमलाई । तर २० वर्षे छोरी गुमाउनु अप्राकृतिक नै लाग्दो रहेछ । ‘सपनामा छोरी आउँछे, रुन्छे । मलाई जानै मन छैन भन्छे ।’ भक्कानो रोकेर भन्दा छाम्न सकिन्थ्यो उनको छातीमा दुखेको घाउ ।
म राष्ट्रको चिन्ता गरिरहेको हुन्छु, आमा मेरै चिन्ता गरिरहनुहुन्छ
कार्तिक ८, २०७३ - सोमवार | नारी खबर
एउटा सामान्य परिवारमा जन्मी हुर्किएर म देशको मन्त्रीसम्म पनि भएँ । अभावविनाको त मानिसको जिन्दगी नै हुँदैन । सायद मुमालाई पनि अभाव भयो होला । उहाँका पनि इच्छाहरु थिए होलान् । केही अपेक्षाहरु पनि नभएकै त होइन होला नि । तर आजपर्यन्त मेरासामु कहिल्यै पनि व्यक्त गर्नु भएन ।
एक सय २० वर्षीया अामा भन्छिन्, ‘छोराछोरी मरे, तर मलाई काल आएन’
६ कार्तिक, जाजरकोट- यहाँको भेरीमालिका नगरपालिका–६ की भीमा वली अहिले एक सय २० वर्षकी भइकी छन्। आफूले जन्माएका १२ छोराछोरीमध्ये नौ छोराछोरीको मृत्यु भइसकेको छ तर भीमा वली भने जीवितै छिन्। एक सय २० वर्षीया भीमा वलीले अझै पनि आफूले पोलेको मकै र भुटेको भट्ट (भटमास) खानसक्ने बताउँछिन्। आँखा नदेख्ने र कान नसुन्ने वलीको बोल्नलाई…
एउटी आमाको चाहना – ‘मेरा छोराहरुले मलाई निर्वस्त्र (नाङ्गै) देखुन्’
एउटी आमा आफ्ना सन्तानले आफूलाई निर्वस्त्र देखुन् भन्ने चाहन्छिन् । उनलाई आफ्ना सन्तानले कुनै पनि अश्लिल पत्रपत्रिका नपढुन्, अश्लिल चलचित्र नहेरुन्, त्यसमा नग्न महिला देखेर महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो नबनाउन् भन्ने लाग्छ । सोही चिन्ता भगाउन उनले रचनात्मक उपाय अपनाएकी छिन् । के हो त ? त्यस्तो उपाय । तिनै आमाको भनाइ: म आफ्ना चार छोराहरुसँग बस्दछु…
‘निरञ्जना! म गएँ छोरी…
शारदा शर्मा म चित्रांगदा कपाली। जीवनमा हेर्ने अन्तिम दृश्य र गर्ने अन्तिम अनुभव यिनै होलान् भन्ने संकेत र सन्देह पटक्कै मनमा थिएन, जतिखेर म बसुन्धराको मधुमालती ब्यूटीपार्लरमा कपाल काट्ने मेचमा बसिरहेथें। वैशाख २९ गते, २०७२ साल, करीब एघार बजेको थियो होला बिहानको। दिज्जू, फेसियल गरिसिन्न ? थ्रेडिङ गर्ने बेला नि भएछ… कपाल काटिदिंदै मधुले भनी। हो…
आमाको अपराध, निर्दोष नाबालक पनि जेलमा………..
३ असोज काठमान्डौँ – बेसीशहरः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा कारागार चलान भएकी एक महिला २० हजार धरौटी रकम तिर्न नसक्दा छ वर्षीय छोरा सहित जेलमा बस्न बाध्य भएकी छन् । नवलपरासी कावासोती घर र लमजुङको बिचौर माइत बताउने ३५ बर्षीय सुकमाया मिजारसँगै उनका ६ बर्षीय छोरा सुजन मिजार जेलमै बस्न बाध्य बनेका हुन् ।…
आमा : जसले छोरी जन्मिएको खबर श्रीमानलाई सुनाउनै पाएकी छैनन्
स्वेच्छा राउत काठमाडौं : गर्भवती अवस्थामा माया र सहयोग गर्ने श्रीमान् नै नभए कुनै महिलालाई त्यो क्षणको पीडा कस्तो होला? उदयपुरकी सिर्जना खत्रीले गर्भवती हुँदाका बेला श्रीमानको अभावलाई नमिठो गरी भोगेकी छिन्। अहिले त उनी आमा बनिसकिन्। सानी नानी आँखामा टुलुटुलु हेरेर मुसुक्क हाँसेझैं गर्छे तर सिर्जना खुलेर हाँस्नै सक्दिनन्। थाहा छैन श्रीमान् कहाँ होलान्,…